စစ်တပ်ပိုင် ဦးပိုင်၊ မြဝတီဘဏ်၊ မြန်မာဘီယာနှင့် ဒဂုံအဖျော်ယမကာ တို့ကို အခွန် အများဆုံး ပေးဆောင်သော ကုမ္ပဏီများအဖြစ် သမ္မတဦးဝင်းမြင့် ဂုဏ်ပြု - ရန်ကုန်ခေတ်သစ် မီဒီယာ
August 11, 2020 158
စစ်တပ်ပိုင် ဦးပိုင်၊ မြဝတီဘဏ်၊ မြန်မာဘီယာနှင့် ဒဂုံအဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းတို့ကို အခွန်အများဆုံး ပေးဆောင်သော ကုမ္ပဏီများအဖြစ် သမ္မတဦးဝင်းမြင့် ဂုဏ်ပြု
မြန်မာ့တပ်မတော်ပိုင် ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ၊ မြဝတီဘဏ်၊ မြန်မာဘီယာလုပ်ငန်းနှင့် ဒဂုံအဖျော်ယမကာ လုပ်ငန်းတို့ကို အခွန်အများဆုံးပေးဆောင်သော ကုမ္ပဏီများအဖြစ် သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က ယမန်နေ့က ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း အစိုးရ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။
အခွန်အများဆုံးပေးဆောင်သော ကုမ္ပဏီများအနက် ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန် အများဆုံး ပေးဆောင်ခဲ့ကြသော မြန်မာ့ စီးပွားရေးဦးပိုင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် ဌာနကြီးမှူး ဦးအောင်ရဲဝင်း၊မြဝတီဘဏ်လီမိတက် အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ဦးယုလွင်တို့ကို ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း၊ အလားတူ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် အများဆုံးပေးဆောင်ခဲ့ကြသော Myanmar Brewery Ltd. CSV Director ဒေါ်မေစံပယ်ဝင်းတို့ကို ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ကြောင်း အစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် အများဆုံးပေးဆောင်ခဲ့ကြသော Myanmar Brewery Ltd. Chief Operating Officer ဦးကျော်ကြား၊ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် အထူး ကုန်စည်ခွန် အများဆုံးပေးဆောင်ခဲ့သော Myanmar Brewery Ltd. Deputy Managing Director ဦးစိုးကျော်သူ၊ ဒဂုံအဖျော်ယမကာကုမ္ပဏီလီမိတက် အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးလှမင်းတူတို့ကို ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာဘီယာလုပ်ငန်းသည် ဦးပိုင်နှင့် ဂျပန်အခြေစိုက် ကီရင်ကုမ္ပဏီတို့ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ဒဂုံအဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းသည် စစ်တပ်ပိုင် မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းMEC က လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
စစ်တပ်ပိုင် ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူ ဥရောပ အာရှကော်မာရှယ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊အီလန်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖျော်ရည်ယမကာ ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် သမဝါယမဘဏ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၊ မြန်မာစပျစ်နှင့် အဖျော်ရည်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက် ၊ ဒန်ကိုထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ ကျော်စံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ ပီတီစွမ်းအားထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ၊ စီးတီးမတ်ဟိုး(လ်)ဒင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ အာရှစွမ်းအားကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖျော်ရည် ယမကာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ ရွှေဗျိုင်းဖြူကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ ဟေးဒေးအင်နာဂျီ ထရေးဒင်း ၊ မက်(စ်)အင်နာဂျီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ လီဗီးယား လီမိတက် ၊ဒဂုံအဖျော်ယမကာကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ ရွိုင်ရယ်ကလပ်ဘီးဘရေ့(ခ်ျ)ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ အက်(စ်)အမ်အမ် ရွှေမြန်မာအဖျော်ယမကာကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ ရောင်နီအရက်ချက်စက်ရုံ ၊ ဂိုး(လ်) ဒင်းအိုရီယဲ့(န်)တဲ(လဲ) လိ(ဖ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ ဗစ်ထရီမြန်မာဂရု(ပ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ ဗဟိုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ အာရှဖျော်ရည်များ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ လင်းလက်ဝင်းကျောက်မျက်ရတနာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊ရတနာကြယ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၊Moattama Gas Transportation Co.,Ltd. ၊ Telenor Myanmar Ltd. ၊ Taninthayi Pipeline Company LLC (Myanmar Branch) ၊ Myanmar Yang Tse Copper Ltd. နှင့် Myanmar Brewery Ltd. CSV ၊ Ooredoo Myanmar Ltd. ၊ Virginia Tobacco Co.,Ltd. ၊ Grand Royal Group International Co.,Ltd.၊ Heineken Myanmar Ltd. နှင့် Myanmar Carlsberg Co.,Ltd. တို့ကိုလည်း အခွန်အများဆုံး ပေးဆောင်သော ကုမ္ပဏီများအဖြစ် သမ္မတက ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
“တိုင်းရင်းသားအရေးအတွက် ဘာတစ်ခုမှ မထူးခြားဘူး။ ဘာအခွင့်အရေးမှလည်းမရှိဘူး။ NLD ကအခြေခံဥပဒေပြင်တော့ တိုင်းရင်းသားကိစ္စ တစ်ချက်မှမပါဘူး”
၂၀၁၉ မှာ တရုတ်က မြန်မာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအာဏာကိုပါ စွက်ဖက်တဲ့အထိ သြဇာချဲ့ထွင်နေသလား
By kyaw moe January 3, 2019